Ifumaneka e-Zhangjiagang, isixeko esikwizibuko ngase-Shanghai, ecaleni kwe-Yangzi River, e-Zhangjiagang City Daking Jewellery Co, Ltd. yasekwa ngo-1992. Siye sazibandakanya ekulimeni iiperile, ukuvelisa nokwakha ubucwebe beeperile, ubucwebe besilivere, ubucwebe begolide njenge kunye nezacholo ezinamatye anqabileyo kunye nezacholo zefashoni ngaphezulu kweminyaka engama-28.
Sinefama yethu yokulima iperile enamanzi agubungela ngaphezulu kwe-667,000 yeemitha zesikwere, kunye nomzi mveliso wokuvelisa, kwaye amandla ethu emveliso yonyaka afikelela ngaphezulu kweetoni zeetrikhi ezili-100. Senza zombini iimveliso ezigqityiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo.Iimveliso zethu zobucwebe zefashoni zahlukile, kubandakanya izacholo zomqala, izacholo, amacici kunye neeseti zobucwebe, kukho uyilo olungaphezulu kwama-8,000. Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini yokuphuhliswa, inkampani yethu izise ubuchwephesha bokuqhubela phambili kunye nokudaya ubuchwephesha kwaye yenze umgca wokuvelisa, kunye nolawulo oluhlanganisiweyo lomgangatho kunye nenkqubo yolawulo.Futhermore, inkampani yethu ineqela elisebenza kakuhle. Ukwaneliseka okwasekhaya nakwamanye amazwe Kule minyaka ingama-23 idlulileyo, iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela ngokubonelela ngamaxabiso afanelekileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo, inkampani yethu ifumene indumiso kubathengi bethu kwihlabathi liphela. Sijonge ukwandisa ishishini lethu kwaye sizama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso ezingcono kunye nenkonzo kubo bonke abathengi.Ukujonga kwikamva, siza kwenza iinzame ezingapheliyo zokubonelela ngemveliso esemgangathweni. Bazinikele ekunikeni ishishini lobucwebe ngentembeko, igalelo kunye nomoya wehlombe.
Ukuthatha ubucwebe Co, Ltd.
Sijongene nobugcisa beeperile, iimveliso zeqokobhe, amatye axabisekileyo semi njalo njalo
Ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo weshishini "onoxanduva lwabathengi, ukuphumelela kunye nabathengisi", inkampani ilawula ngokungqongqo umgangatho weemveliso.
Inkampani ibambelela ebaluleke kakhulu kwindibaniselwano egqibeleleyo yobucwebe bendabuko kunye bale mihla, izibonelelo kunye nezinto ezintsha, iteknoloji kunye nobugcisa.
Sinengcamango entsha yoyilo, iqela elisebenzayo elisebenzayo, lihlala lihambelana nokusebenza okusemgangathweni, inkonzo yengqibelelo, iimfuno kunye nokwaneliseka kwabathengi kwindawo yokuqala.
Ubume bemveliso yenkampani butyebile, kwahluka-hlukeneyo, ukuveliswa kweentsimbi zomqala, izacholo, izacholo, amacici, amacici, amakhonkco, amaqatha, iisuti iindidi ezilithoba, zizonke zizimbo zemveliso ezingaphezu kwama-8000.
Inkampani inengcamango entsha yoyilo, iqela elisebenzayo elisebenzayo, lihlala lihambelana nokusebenza okusemgangathweni, inkonzo enyanisekileyo, ukubeka iimfuno zabathengi kunye nokwaneliseka kwindawo yokuqala, iphumelele ukudumisa abathengi ekhaya nakwamanye amazwe.
+ Isikwere seemitha
Ukuthatha abasebenzi kuyahambelana nomoya wokunyamezela, ukusebenza nzima kunye nokugqibelela
Aphi Amehlo Wethu
Siya ngqo umgaqo "umgangatho yokuphila, igama kuphuhliso"
Ngokunyaniseka kubathengi kunye nokunyamekela umsebenzi, sizama ukuqhubeka phambili kwishishini.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda unxibelelane nathi ngexesha. Sinethemba lokuba sisebenzisana nawe ukuze sidibane siphuhlise imarike yobucwebe kwaye senze ikamva eliqaqambileyo kushishino lwezacholo.